Akụkọ - bulldozer ebuli elu!
Bulldozer buliri elu buliri elu!
On Mar.12th, 2020, ogbe nke SD7N elu-sprocket bulldozer zigara n'ọdụ ụgbọ mmiri na njikere maka loading maka Russia & CIS mpaghara ahịa.
Ndị ahịa a na-azụta ndị okike a, iji rụọ ọrụ maka ịgbachapụ na ikpokọta ihe mkpuchi. Ha zụtara ngwongwo mbụ nke bulldozer na-akwọ ụgbọ elu si HBXG na 2015. N'ime afọ ise gara aga, ndị ọrụ ehi mbụ a abanyela ọrụ ihe dị ka oge ọrụ 20,000. A na-enwe mmasị na ndị ahịa site na arụmọrụ dị mma banyere ntụkwasị obi na ịrụ ọrụ nke ọma nke ndị bulldozers. Ebe ọ bụ na mmụba nke ikike mmepụta nke m, onye ahịa ahụ zụtara ndị bulldozers ọzọ site n'ụdị ọnụ ahịa. HBXG meriri obi ahụ ọzọ site na ngwọta dị mma enyere enyere aka site na njirimara njirimara yana mmemme mmemme ahịa afọ ojuju.
Ka ọ dị ugbu a, isi ngwaahịa SHEHW na-ekpuchi bulldozer, pipelayer, wheel loader, drilling rig, excavator na mining gwongwo wdg ya bulldozer ngwaahịa ekpuchi 130-430 zuru usoro usoro ụdị bulldozer na agbatị ngwaahịa, a na-agbasa iji akụrụngwa, ọzara akara, mmanụ ubi na ọdụ ụgbọ mmiri oru ngo, mmiri-ike injinịa, Metallurgical m, gburugburu ebe obibi idebe ahihia osisi, ala oru oma oru ngo wdg SWMC bụ nanị ụlọ emeputa nwere isi technology nke elu sprocket klọldị, dị ka SD7N, SD8N, SD9N, nke nwere ike na-aghọta ọnụ ọgụgụ mmepụta. Elu sprocket bulldozer teknụzụ dị na nnọchite ọkwa ọkwa teknụzụ kachasị elu na ọkwa ọkwa kachasị elu. Ezi uche imewe na okirikiri nhọrọ ukwuu na-ekpebi elu sprocket bulldozer nwere atụmatụ nke elu arụmọrụ, elu mma, elu anwụ ngwa ngwa na mfe mmezi.
HBXG ga-agbaso na nkà ihe ọmụma dịka ha mere na mbụ, na-elekwasị anya n'ihe ndị ahịa chọrọ, iji meziwanye ngwaahịa na mmelite, mezue ọrụ ndị na-ere ahịa, na-akwalite mmezi nke ndị ahịa iji ghọta na ha na ndị mmekọ na-eto eto!